တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဖြစ်ပုံ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 31/05/2022 23:36 | လေ့ကျင့်ရေး
သင်ကြားရေးလောကအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသော ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ခြေလှမ်းများကို လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများစွာတွင် ရှိနေသည်။ တစ်ခါတရံမှာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပညာရှင်ပဲလေ။ လူသားဝါဒ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မျိုးဆက်သစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။. တက္ကသိုလ်မှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ပန်းတိုင်က ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပညာရှင် မျှော်မှန်းချက်ပါ။ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလဲ။
1 1. ပါရဂူဘွဲ့ ထမ်းဆောင်ခြင်း။
2 2. တွဲဖက်ပါမောက္ခ
3 3. သုတေသီအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အလုပ်အား အသိအမှတ်ပြုပါ။
4 4. အတိုက်အခံဖြစ်စဉ်ကိုရင်ဆိုင်ပါ။
5 5. ဧည့်ပါမောက္ခ
1. ပါရဂူဘွဲ့ ထမ်းဆောင်ခြင်း။
ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း ပြီးဆုံးခြင်းသည် တက္ကသိုလ်တွင် အလုပ်လုပ်လိုသော ပညာရှင်များကို တံခါးဖွင့်ပေးမည့် သုတေသန ပရောဂျက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကျောင်းသားသည် ပါရဂူကျောင်းသားအဖြစ် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍအသစ်မှ ၎င်းတို့၏ လေ့ကျင့်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အချို့သော သုတေသီများက ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် ပံ့ပိုးကြသည်။ ပါရဂူအဆင့်တွင်၊ Thesis ပြင်ဆင်မှုသည် ကျောင်းသား၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်သည်။.
အလုပ်၏ဗဟိုဆောင်ပုဒ်ကို ကျကျနနသိရှိနိုင်ရန် မတူညီသောသတင်းရင်းမြစ်များဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာအပြင် ပါရဂူဘွဲ့၏ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် သင်ကြားခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့အတူ၊ လက်ထောက်ပါမောက္ခဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဤဘွဲ့ကိုရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။.
တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်သည် သင်ကြားလိုသူများအတွက် စိတ်ပါဝင်စားစေမည့် မတူညီသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ တွဲဘက်ပါမောက္ခတွေရဲ့ အလုပ်အခြေအနေကရော ဘယ်လိုရှိလဲ သိလား။ အဲဒီအခါမှာ ဆရာ့အလုပ်က တခြားနေရာမှာ ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်စင်တာနှင့် မသက်ဆိုင်သော ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်သည့်နေ့ကို ဖော်ဆောင်ပါ။.
ဒါအပြင် သူက သူ့ကို ငှားရမ်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ တစ်ပတ်ကို နာရီအနည်းငယ် အတန်းတွေ သင်ပေးတယ်။ ယင်းသို့ ရာထူးလျှောက်ထားရန်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်က သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကောင်းတစ်ခု တင်ပြဖို့ အရေးကြီးတယ်။. သင်၏သင်တန်း၊ သင်ပြုလုပ်ထားသော စာစောင်များနှင့် သင့်လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းသည် သင်သင်ကြားမည့် အထူးပြုဘာသာရပ်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေရပါမည်။ သင်ကြားရေးအလုပ်ကို အချိန်ပိုင်းဆောင်ရွက်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤဒေတာကို အတန်းတက်ချိန်နှင့် အချိုးကျသော လစာတွင်လည်း ထင်ဟပ်ပါသည်။
3. သုတေသီအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အလုပ်အား အသိအမှတ်ပြုပါ။
တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်ရရန်၊ ယခင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းကို ပြီးမြောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်၊ ထို့အပြင်၊ သုတေသနနယ်ပယ်တွင်ဆောင်ရွက်သောအလုပ်ကိုအခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာအားသာချက်များဖြင့်အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ, အထူးပြုပရောဂျက်များတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ သိပ္ပံဂျာနယ်များတွင် ဆောင်းပါးများ ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ညီလာခံများတွင် ပါဝင်ခြင်း၊.
ဂုဏ်သတင်းကြီးသော ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ထုတ်ဝေရန် တောင်းဆိုသည့် အခြေအနေများသည် အလွန်တောင်းဆိုနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သုတေသီ၏ အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုသည့် စာစောင်များသည် အထူးပြုမီဒီယာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင်၊ သုတေသီသည် မတူညီသောထုတ်ဝေသူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော စာရေးဆရာတစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် စာအုပ်များ ရေးသားနိုင်သည်။
တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရည်မှန်းချက်ကို မည်သို့အောင်မြင်နိုင်မည်နည်း။ ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဥ်ကို မည်သို့စီစဉ်မည်နည်း။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေးချယ်သည့်ဗဟိုသည် ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် အများပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဆင်ပြေသည်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် အတိုက်အခံလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပေါ်လာရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်တွေ့ဆုံရမည့် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကမ်းလှမ်းမည့်နေရာအရေအတွက်ကို သိရှိရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် အခြေခံများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမည်။
တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဖြစ်ရန်၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကို ပြီးမြောက်ပြီး စာတမ်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆက်လက်လေ့ကျင့်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဒေါက်တာဘွဲ့နှင့် သုတေသီတစ်ဦးအနေဖြင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် မတူညီသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအတွက် လျှောက်ထားရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ, လျှောက်ထားသူသည် တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ယာယီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် အလည်အပတ် ပါမောက္ခအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် သူသည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို တောင်းဆိုထားသည့် တက္ကသိုလ်တွင် နေထိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
ဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်ကို ဘွဲ့ထူးနဲ့ သင်ယူနိုင်မလဲ။